मैत्रीपुर्ण भलिबल प्रतियोगितामा कालिकोट बिजयी : RajdhaniDaily.com - Kalikot Volleyball
Home खेल मैत्रीपुर्ण भलिबल प्रतियोगितामा कालिकोट बिजयी
मैत्रीपुर्ण भलिबल प्रतियोगितामा कालिकोट बिजयी
कालिकोट । नेपाली सेनाको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित मैत्रीपुर्ण भलिबल प्रतियोगितामा कालिकोटवासीको टिम बिजयी भएको छ । नेपाली सेना रणसुर गुल्म कालिकोटले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगितामा कालिकोट जिल्लावासीको तर्फबाट खेल्ने टिम बिजयी भएको हो ।
प्रतियोगितामा नेपाली सेना, प्रहरी र राष्टसेवक कर्मचारीको टिम र जिल्लावासीको टिम गरी दुई वटा टिमहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । लगातार पाँच वटा गेमहरु (बेष्ट आफ फाईप) खेलिएको खेलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र कर्मचारीको सयुक्त टोलीले दुई वटा गेम जित्यो भने जिल्लावासीको टिमले तीन वटा गेम जितेर बिजयी हुन सफल भएको हो ।
बिजयी टिमलाई मेडल, प्रमाणपत्र, टफि र उप बिजेता टिमलाई मेडल र प्रमाणपत्र दिएर सम्मान गरिएको छ । जिल्लावासीको तर्फबाट खेलेको टिमले जितेको टफि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा राखिने र प्रत्यक बर्ष हुने प्रतियोगितामा उक्त टफि प्रयोग हुनेछ । हरेक बर्ष जिल्लावासीको टिमले जिते उक्त टफि जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा रहने र कर्मचारीहरुको टिमले जिते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिने सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाले यस बर्षबाट सुरुवात गरेको मैत्रीपुर्ण भलिबल प्रतियोगिता प्रत्यक बर्ष निरन्तरता दिने रणसुर गुल्मका गुल्मपती मेजर उत्तम कटुवालले बताए । उनले भने, जिल्लामा सबैको चासो र लोक प्रिय खेल भलिबल भएकाले नेपाली सेना दिवसको अवसरमा भलिबल प्रतियोगिता राखिएको हो । यसले नेपाली सेना र नागरिकहरु बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर हुने र भलिबल प्रतिको स्थानिय युवाहरुको लगाव पनि बढ्नेछ । जिल्लामा अन्य खेलहरु भन्दा भलिबल प्रति स्थानीय युवाहरुको आकर्षण छ । हरेक गाँउमा भलिबलका जिल्ला र क्षेत्र स्तरीय खेलाडीहरु रहेका छन् । जिल्लाबाट करीव एक दर्जन खेलाडीहरुले राष्टिय स्तरका प्रतियोगितामा पनि भाग लिन सफल भएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल भलिबल संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा राष्टिय खेलाडी ऐनबहादुर शाहीले नेपाली सेना दिवसका अवसरमा भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेर भलिबल खेलको प्रबद्र्धनमा महत्वपुर्ण भुमीका खेलेको बताए । उनले आफुहरुले मोचीको बल बनाएर खेल्न सुरुवात गरेको भलिबल अहिले गाँँउ गाँउमा जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरका खेलाडीहरु उत्पादन हुने जिल्लाको ठुलो उपलब्धी भएको बताए । उनले भने, सेनाले आयोजना गरेको मैत्रीपुर्ण भलिबल प्रतियोगितामा खेलाडीहरुले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका छन् ।
सेना दिवसका अवसरमा आयोजित मैत्रीपुर्ण भलिबल प्रतियोगिता बिजयी टिम । तस्बिर :विश्वनाथ सिम्खाडा / कालिकोट
बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ
काठमाडौं । ३९ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा राजापुर नगरपालिका–१ चनौरा बस्ने २४ वर्षीय दिनेश थारुलाई आइतबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । थारुले...
मिस तामाङ वल्डको आयोजना
काठमाडौं । काठमाडौंको साधना कला केन्द्रले विगत डेढ दशकदेखि तामाङ समुदायका युवतीको प्रतिभा प्रस्तुतिका लागि मिस तामाङ कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको थियो । यो वर्षबाट...
श्री स्वस्थानी व्रत समापन
ललितपुर । एक महिने श्री स्वस्थानी व्रत आज (आइतबार)बाट समापन हुँदै छ । पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि सुरु भएको व्रत माघ शुक्ल...
बैतडीमा कुटपीटबाट एकजनाको मृत्यु
बैतडी । बैतडीमा कुटपीटबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं ३ डुङरीका ३२ बर्षीय कमलबहादुर साउँदको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ...
थप ९ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५१६ पुग्यो
Breaking News Sushila Bishwokarma - May 22, 2020 0
काठमाडौं । थप ९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा मकवानपुरको हेटौंडा-३ का ५४ वर्षीया महिला र...
Breaking News Sushila Bishwokarma - January 27, 2021 0
हात्तीपाइले रोगविरुद्ध कमजोर अभियान
बिचार डा. प्रकाश बुढाथोकी - April 3, 2021 0
बाँकेमा २०६७ सालदेखी औषधि खुवाउन थालिए पनि लक्षितवर्ग सबैले आजसम्म औषधि खाएका छैनन् । गत वर्ष ५ लाख ४२ हजार ६ सय ३६ जनालाई...
Breaking News Dhruba Lamsal - July 14, 2020 0
बुटवल । अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिराका कारण पूर्वपश्चिम र सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत...
बिचार Kumar Raut - July 12, 2020 0
बिचार Kumar Raut - June 5, 2020 0
Not-to-be-missed Kumar Raut - July 9, 2020 0
राजनीति Dhruba Lamsal - May 31, 2020 0
Breaking News Roshan Shrestha - September 6, 2020 0
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामान्य मनमुटाव तथा लेनदेनसहित अवैध सम्बन्धका कारण हुने विवादले हत्याको रूप लिन थालेको छ । यस्ता हत्याका घटनामा परिवारसँग जोडिएका...
होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला
रबिन कटेल - April 18, 2021